I-TIZEN Enye i-Firefox OS? | Kusuka kuLinux
Eminyakeni yakamuva, amaselula, Amathebulethi, ama-Chromebook, ama-Ultrabooks, akhule ngokuthandwa, enikeza inzuzo enkulu kosomabhizinisi, namuhla lawa makhompyutha abalulekile usuku nosuku, kodwa ngaphezu kwakho konke inkathi entsha isiqalile: Isikhathi samadivayisi eselula.
2 Yini iTizen?
Kulezi zinsuku umakhalekhukhwini, ikhompyutha seyivele idingeka usuku nosuku, awusebenzisi umakhalekhukhwini njengokuthile kwansuku zonke empilweni yakho?
Izinkampani ziqale ukubona ikusasa lamafoni weselula zaze zakha amadivayisi amakhulu kusixhumi esibonakalayo esincane kangaka, ukubukeka kungakhohlisa, akunjalo?
Amadivayisi alawulwa uhlelo olusebenzayo okunguye owenza lo msebenzi, noma Android, iOS, I-Windows Phone, I-Firefox OS, ahlukile, kepha enzelwe ukusetshenziswa okufanayo. Kepha ngokuqhubeka kwakho, kutholakala izinhlobo eziningi, kulokhu Tizen
Tizen is a Linux-based Open Source operating system, exhaswe yi Linux Foundation futhi i Isisekelo seLiMo. Kusuka kuMeeGo.
Izindlela zokuxhumana zeTizen zisuselwa ku-HTML5 nakwamanye amazinga wewebhu futhi zizokwakhelwa ukusetshenziswa kumathebulethi, kuma-netbook, kuma-Smartphones, kuma-smart TV nakuma-infotainment system ahlanganisiwe, afana ncamashi nalawa I-Firefox OS.
Kubhalwe ku-HTML5 (Okushiwo Ngaphezulu) naku-C ++, futhi kusebenzisa iMenenja yephakheji ye-RPM.
Ungathola imininingwane eminingi ngale pulatifomu ku- iwebhusayithi. Uthini owakho umbono? Yishiye kumazwana 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » I-TIZEN Enye i-Firefox OS?
Hheyi, iyathandeka .. Kufanele uhlole ukuthi lolu hlelo lunjani 😀
Kimi kunephuzu elibuthakathaka kakhulu kunoma yiluphi uhlelo olukhona lwama-mobiles: Izicelo.
Akunandaba ukuthi iTizen (iphrojekthi ethakazelisa ngempela) ilunge kangakanani, noma i-Ubuntu Phone OS; Uma bengenazo izinhlelo zokusebenza ezinhle zokufaka, iMakethe noma i-AppStore, abasebenzisi ngeke baze bazame.
Beka iTizen angicabangi ukuthi kunezinkinga, ngoba imboni enkulu ingemva kwale phrojekthi (Samsung). Ngendlela, ikhodi engaba yingxenye yeTizen iphathelene nokuphathwa
I-WTF? Ikhodi Yobumfihlo? Futhi ingabe iLinux Foundation iyakusekela lokho?
Akumangalisi ukuthi i-Linux Foundation isekela ikhodi yokuphathelene noma ngabe ngaphakathi kwe-kernel uqobo (ama-Blobs kanye nabashayeli).
Ngasala nobuso obudidekile obufanayo, ngabe sengibona ukuthi i-Linux Foundation ayifani neFree Software Foundation. I-TLF iyawasekela amaphrojekthi asuselwa ku-GNU / Linux, kepha awanayo inqubomgomo eqinile njenge-FSF kukhodi yokuphathelene
Masikhumbule ukuthi iLinux Foundation yakhiwe yizinkampani ezizimele ezifana ne-HP, IBM, ect
Ungangitshela ukuthi uluthole kuphi lolo lwazi?
Iphuma kwi-Wikipedia efanayo.
Kopisha / unamathisele kusuka ku-Wikipedia:
Yethulwe ekuqaleni njengohlelo lokusebenza lomthombo ovulekile, iTizen 2 inemodeli yokulayisense eyinkimbinkimbi. I-SDK yayo yakhelwe ngaphezulu kwezinto zomthombo ovulekile kepha yonke i-SDK ishicilelwe ngaphansi kwelayisensi ye-Samsung engavulekile.
Uhlelo lokusebenza ngokwalo lunezinto eziningi zemithombo evulekile. Izakhi eziningi ezenziwe ngaphakathi yi-Samsung (isb. I-boot animation, ikhalenda, umphathi womsebenzi, izinhlelo zokusebenza zesidlali somculo), nokho, zikhishwe ngaphansi kweLayisensi yeFlora - okungenzeka ayihambisani nezimfuneko ze-Open Source Initiative. Ngakho-ke, akucaci ukuthi onjiniyela bangalusebenzisa yini ngokusemthethweni uhlaka lohlelo lokusebenza lomdabu kanye nezinto zalo zokuqhafaza ukwenza isoftware yomthombo wamahhala nevulekile njengezinhlelo ze-GPL.
O… lokho akuzwakali kukuhle ukusho ukuthi… IFirefox OS ftw!
Akuyona ikhophi / unamathisela, futhi uma ngabe okungenani ngiyihumushile, akunjalo?
ikati ngisho ukuthi yena (ikati) ukopishe leyo ngxenye ye-WIkipedia, ngoba ngimbuzile umthombo wokunye ukuphawula kwakhe. Akukho okuphikisana nokuthunyelwe 😉
Ha, uxolo, iphutha lami ke 🙂
Lokho iqiniso elikhulu!
Kepha, masikhumbule ukuthi i-Android nayo iqale kancane kancane ... i-android yokuqala ibiyimbi impela kanti ne-G1 ibiyisicathulo ... sizobona ukuthi le misebenzi iqhubeka kanjani.
Uxolo, bengisho ukuthi i-Samsung ne-Intel ... ngalesi sikhathi angazi nokuthi ngibhala ini.
Kubukeka sengathi ubungalungile, kungukuphawula okungezansi kwesokudla? 😛
Konke kubonakala kukhombisa ukuthi kuzoba ngcono kune-Android. I-Android, yize ithathe i-Linux kernel ngokusebenza kwayo, inezakhi ezenza kube sengozini yokuhlaselwa yizinhlobo ezahlukahlukene. Angikazami iFirefox OS, kepha ngicabanga ukuthi kuleso sici kukhulisa ukuphepha okukhulu.
Kwakudingeka ukusho amaphuzu abaluleke kakhulu! I-Tizen yenziwa ndawonye yizilo ezimbili ezifana ne-Samsung ne-Intel. AbakwaSamsung (ngombono) bahlela ukushintsha kancane kancane ibanga labo le-Galaxy nge-Android yiTizen. Iphuzu elikhulu kunawo wonke lapho lishaya khona i-Firefox OS ukuthi i-Samsung yenze ungqimba lokuhambisana kwezinhlelo zokusebenza ze-Android ezisebenza kuTizen, ungabuka amavidiyo ku-yotubue.
Sethemba ukuthi bazokhipha uhlobo lwesifaki esivumela ukuthi ushintshele kulolu hlelo olusha olusebenzayo kuyo yonke i-Galaxy yangaphambilini. Angiyithandi i-Android, kepha inkinga ukuthi isisesobho (futhi ishibhile, okungekubi nakancane, ngoba angicebile kakhulu) futhi iFxOS iluhlaza ngoba ngifuna wena uluhlaza.
Impela ... umbuzo uthi kungani ... mhlawumbe i-Android ne-Intel bafuna ukuluma lokho okwenziwa yiGoogle njengamanje ... 🙂
Kungikhumbuza omakhalekhukhwini bangaphambilini: kufanele ufake izinhlelo ngokwehlukana.
Akudingeki ukuthi, ngemuva kwale Intel ne-Samsung yibo abayiqalile, i-Intel kanye neNokia badala i-MeeGo ngasikhathi sinye ngaphambi kokuba ngamunye abe ne-linux yakhe yamadivayisi ashumekiwe
Ps ngibona ukuthi i-SDK iyatholakala kepha angiyiboni i-OS noma kuphi, ngabe kukhona owaziyo ukuthi ukukhishwa kokuqala kuzophuma nini?
Umbuzo onentshisekelo, kuzodingeka sibone ukuthi bafuna ukukusebenzisa ngezinga elingakanani kuqala njengokuthile kuphela abakhiqizi bezingxenyekazi zekhompyutha hhayi ukuwela enkingeni yokuntuleka kokulawulwa kwezinguqulo ezintsha njengoba kwenzekile nge-Android.
Ubuhle obunjani, iqiniso lokuthi lingumthombo ovulekile kuphela ngokusho kwendatshana futhi alikho mahhala kungenza ngibe oqaphile (yize kuzodingeka ukuthi libonwe, ngoba noma ngabe likhululekile noma cha likhululekile kumuntu onjengami, ongalandeli inkolo ye-FSF), kepha ngijabule ngokufanayo ngezindaba ezinjengalezi, kungenza ngicabange ukuthi kukhona elinye ikusasa kumaselula lapho ngigcina ngisebenzise i-imeyili yami futhi ngigcine imininingwane yami ebalulekile. Ingasaphathwa ukukwazi ukufeza ubumfihlo obukhulu.
Angazi ngawe, kepha angithembi unwele lwe-Android, iOS, njll.
Ngibheke phambili ekunambeni i-Firefox OS.
Hmm ... Ngisanda kufunda kumazwana aphathelene ne-Samsung ne-Intel ...
Yithande, ngizonamathela kwiFirefox OS ngokushesha nje lapho isitholakala esidlangalaleni.
NgineNokia N9 futhi ngijabule kakhulu, ngenxa yomphakathi onayo namuhla kunezinhlelo zokusebenza eziningi eziwusizo usuku nosuku, ngikholwa ukuthi awudingi IZIGIDI zezinhlelo zokusebenza njengasesitolo sokudlala ukuze ube ngijabule ngomakhalekhukhwini.Ngiyayithanda kakhulu iTizen ngenxa yalokho ekubonisayo, kepha ngiyifuna ngempela iCelu eneFirefox OS
endala efanele ukuthenga i-n9? Nginama-700 ane-symbian, kepha angazi ukuthi ungafaka yini izinhlelo zokusebenza noma ulayini kuwo noma zinjani izinhlelo ze-twitter kanye ne-facebook. Uxolo bafana, kepha njengoba ngibonile ukuthi unaye, ngisebenzise lelo thuba.
Ngendlela i-tizen ibuye ibe nomfowabo oyisizukulu oyisishefish, ngoba bobabili baqala kusuka kumego
Okunye okubukeka kukuhle yi-Sailfish OS, eyenziwe nge-Qt naku-Open Source, yize i-interface yayo ikhethekile.
Ungibiza kakhulu nge-Sailfish, kepha ngesaba ikusasa okungenzeka ukuthi le phrojekthi linalo.
Manje njengoba bekhuluma nge-Sailfish, lokhu okuthunyelwe bekuzosuselwa ku-Sailfish, kepha kungcono ngikhethe iTizen. I-Sailfish ine-Wayland, futhi inokusekelwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android.
Yilokho kuphela okuntula iFirefox OS: Ukusekelwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android.
(I-PS: Isithombe esifakiwe sivela kumakhalekhukhwini weSailfish OS)
Amanga! Akuvezwanga, kuvela ekuqaleni kokuthunyelwe. Yehlulekile i-mio xD
Angiyethembi i-Samsung, okuhle ukuthi akuyona le nkampani engemuva nje kuphela kweminye imikhiqizo engemuva kwe-tizen. Kepha kuzofanele sibone ukuthi baphendula kanjani ngezibuyekezo ngoba iningi lifuna ukukuthengisela iselula minyaka yonke, uma kwenzeka njenge-android, noma ngabe balukhipha malini uhlelo, uma bengabadedeli bonke abashayeli end, okuthile kuyohlala kwehluleka lapho uvuselela ngentando yakho.
Yakhe kungaba yindlela efana namakhompyutha, ihadiwe ehlanzekile lapho ungafaka khona i-Os oyifunayo, kepha sengivele ngiyazi ukuthi le yi-utopia.
Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuthi iLinux Foundation iyayisekela le phrojekthi, kepha ngingumsebenzisi oqeqeshiwe weSamsung nohlelo lwayo lweBada, ngoba ngineselula enhle ediloweni ngoba iSamsung ibingafuni ukuvuselela iBada ukuze isebenze kahle (ihamba kancane, iqala kabusha). Akazange futhi azizwe ethanda ukudedela abashayeli lapho eshiya iphrojekthi ukuze asizakale ngocingo lwe-Android, futhi-ke akazizwa ethanda ukudedela isibuyekezo seBada asinikeze iTizen.
Ngamafuphi, ushiye amakhasimende akhe elenga (okungenani mina futhi ngicabanga ukuthi abanye abaningi abanjengami) ngenqubomgomo embi. Njengoba ngenza okufanayo noTizen ngibona ikusasa lakhe lincane.
Ekugcineni, uhlelo olulodwa olusebenzayo, kepha empeleni kuzobonakala ukuthi ngubani onabasebenzisi abaningi nezintandokazi, futhi lokho kuzoncika kuzinhlelo zokusebenza, endleleni i-OS eyakhiwa ngayo nokuthi ikuphi, ngicabanga ukuthi kunesikhala kwabo bonke.